भारतबाट एकैदिन ३० लाख ७२ हजारभन्दा बढी खोप नेपाल आइपुग्यो - Baikalpikkhabar
भारतबाट एकैदिन ३० लाख ७२ हजारभन्दा बढी खोप नेपाल आइपुग्यो
काठमाडौं, पुस ५ / भारतबाट एकै दिन कोभिसिल्ड र भेरोसेलको ३० लाख ७२ हजारभन्दा बढी कोरोनाविरुद्धको खोप (डोज) नेपाल आइपुगेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसियाका अनुसार सोमबार दिउँसो कोभिसिल्ड र भेरोसोल गरी ३० लाख ७२ हजार ३८७ डोज खोप काठमाडौं आइपुगेको हो ।
भारतबाट १८ लाख ७० हजार पाँच सय डोज कोभिसिल्ड र चीनबाट १२ लाख १ हजार ८८७ डोज भेरोसेल खोप नेपाल आइपुगेको डा. चौरसियाले जानकारी दिनुभयो ।
कोभिसिल्ड कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत र भेरोसेल खोप एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा चीनबाट नेपाल सरकारले खरिद गरिएको हो ।
सोमबार बिहान मौसम खराबिका कारण जहाज अवतरण गर्न नसकेपछि चीनबाट ल्याइएको भेरोसेल खोप फिर्ता भएको थियो । तर, सोमबार दिउँसो ३ बजे उक्त खोप पुनः आएको चौरसियाले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा तीन करोड ५४ लाख ६६ हजार ९८० मात्रा खोप आएकामा अहिलेसम्म दुई करोड १७ लाख ५६ हजार ७६३ मात्रा खोप लगाइसकिएको छ ।
कुल जनसङ्ख्याको ३९ Þ८ प्रतिशतले एक मात्रा र ३१ Þ८ प्रतिशले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् ।
त्यस्तै लक्षित जनसङ्ख्याको ६० Þ७ एक मात्रा र ४८ Þ४ पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन् ।
सोमबार, ०५ पुष, २०७८, साँझको ०५:३२ बजे